Sidee baan u bartaa inaan kasbado faa'iidooyinkayga oo aan yareeyo khasaaraheyga? | FXCC Blog
Sidee baan u bartaa inaan kasbado faa'iidooyinkayga oo aan yareeyo khasaaraheyga?
Apr 24 • Inta u dhaxaysa laynka • 9187 Views 1 Comment on Sidee ayaan u bartaa si aan u kordhiyo faa'iidooyinkayga oo aan yareeyo khasaaraheyga?
Waxaa jira xaqiiqooyin xaqiiqo ah oo ku sii jiray sanado badan oo la xiriira ganacsiga. Ganacsatada qibrada leh iyo kuwa guuleysta waxay tilmaamayaan in, inkastoo ay awood u leeyihiin in ay helaan jaangooyooyin sare 'xaq', si ay u soo galaan suuqa marka ay astaan ​​u yihiin markii ay soo baxeen calaamado, marnaba waligood ma heli doonaan sax.
Qaadashada 'sax' waa mid ka mid ah qaybaha ugu adag ee ganacsigeena, taas oo shaki weyn ku noqotay ganacsatada cusub in ay ka baxeen marnaba inaanu ogaanno iyo in aan ku khasbanaanno inaan ku dallacno qayb ka mid ah qorshahayaga ganacsiga waxkasta oo qadarin leh iyo cabsi la'aan ama dib-u-eegis ah oo aan ka tagnay pips iyo dhibco badan miiska. Waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan gaarsiinno heer sare, laakiin dhammaystirnaanta (halkaasoo ganacsiga uu ka walwalsan yahay) waa hamaan aan macquul ahayn.
Sidaa daraadeed waxaan kordhineynaa faa'iidadeena iyo yareynta khasaaraheena waxaa lagu gaari karaa oo kaliya marka lagu jiro xuduudaha qorshaha ganacsiga. Marna ma noqon doonno meel aan si sax ah u saadaalin karno, qaab kasta oo hubaal ah, sare iyo hoose ee dhaqdhaqaaqa suuqyada, laakiin waxa aan sameyn karno ayaa sameeynaya istaraatijiyad noo ogolaaneysa inaan qaadno saamiga weyn ee suuqyada suuqa kala iibsiga ee pips ama dhibcood. Halkii waxbarashada si faa'iido u kororsadaan iyo yareeyo khasaaraha our waa in aan wax ku bartaan si ay u aqbalaan xadeynta iyo shaqeeyaan iyaga gudahooda. Haddaba sidee baan u dejin karnaa xawaaladeena?
Qorshee xirfadaha iyo ganacsiga qorshaha
Nasiib wanaag, haddii aan leenahay is-edbinta si aan u hoggaanno istaraatijiyad ganacsi iyo qorshe ganacsi oo aan aaminsannahay, markaa xajmigeena si aan u qaadno faa'iidadeena iyo xaddididda khasaarooyinkeena waa in lagu dejiyaa lumitaanka joojinta oo aan qaadanno amar xadidan oo faa'iido leh markii suuqa laga soo galo, inkasta oo labadan xuduudoodba la isku hagaajin karo iyadoo ganacsiga uu sii socdo. In la dejiyo xuduudaha lumitaanka joogtada ah iyo amar xadidan faa'iido faa'iido leh walaaca iyo masuuliyadda qaadashada sare iyo hoose ee dhaqdhaqaaqa suuqyada ayaa nalooga soo saaraya annaga oo aan wax ka qabanno istaraatijiyadda.
Raadinta lumitaanka joojinta si aan u yareeyo khasaaraheena
Mid ka mid ah habka loo yareeyo khasaarihii nooga iman lahaa waa 'raad' joogsigeena, ama inaan u dhaqaaqno iyadoo la raacayo akhrinta tilmaame sida PSAR. Sidaan waxaan ku xirnaa faa'iidadeena maaddaama ganacsiga uu u socdo si naga mid ah waxaanan hoos u dhigi karnaa saameeynta suurtagalka ah is-beddel deg-deg ah oo leh guulaha ganacsiga iyo faa'iidada.
Dhibaatooyinka joogsiga joojinta ayaa laga heli karaa goobaha ganacsiga badankood (badanaaba) oo ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan ee lagu qiimeeyay iyo qalabka la isticmaalo ee laga heli karo meheradaheena iyo sida taasi waxay u sahlaysaa ganacsatada in ay yareeyaan khasaarooyinkayaga. Joojinta joojinta sidoo kale way fududahay 'code' oo la-taliyeyaal khibrad leh oo aan ka doorbideyno isticmaalka, tusaale, MetaTrader 4.
Xakamee khatarteenna, waxaannu leenahay gees
Far ganacsatada aad u badan, gaar ahaan ganacsatada laylis, qiyaasi in ay laayeen waxay ka timaada HPSU (itimaalka sare qotomiyey) dhaca. xaqiiqadu waxa ay tahay in ku laayeen in tabta guud waxaa laga farsamada gacanta halista iyo maamulka lacagta aan jimicsi oo aan dhinac habka of our ganacsiga ah. Sidoo kale inkasta oo ay tahay bayaan ganacsi oo dabacsan oo si tartiib tartiib ah u noqda mid ujeedo leh internetka; "Meelaha daba-galka iyo kor-u-kaca ayaa is daryeeli kara" dhab ahaantii waa hadal ay leedahay, asalkeeda, arrin xooggan oo run ah iyo ansax ah marka la fulinayo suuqa.
Kordhinta macaashkayaga oo qayb ka ah istaraatijiyadayada ganacsiga
Sida aynu hore u soo qaadnay ma jirto hab noo suura gelineysa, oo aan si sax ah u joogno, ama si aan caadi aheyn, si aan si fiican u soo qaadno hoosta iyo sare ee dhaqdhaqaaqa suuqyada, haddii aan nahay ganacsi maalmeed, ganacsiga suuqyada, shaqo aan macquul ahayn. Sidaa daraadeed markaan habaynay habkeena ganacsiga oo aan ku rakibno qayb ka mid ah 3Ms ee qorshaha ganacsigaaga ah waa inaan isticmaalnaa tilmaamayaasha si aan ugu dhiirigelinno inaan ku xirno ganacsiga, ama isticmaalno nooc ka mid ah aqoonsiga qaabka shamaca sida badiyaaba loo qiimeeyo sida "qiimaha tallaabo ". Si kastaba ha ahaatee, hadba aan dooran, laga baxo saldhig tallaabo qiimaha, ama laga baxo ku salaysan tilmaame, ma jiro weligiis yeelan doonaan 100% isku halaynta.
Sida calaamad ku salaysan sababaha loo xirayo waxaan isticmaali karnaa PSAR rogitaanka jihada si ay u muuqato dhinac ka soo horjeeda qiimaha. Haddii kale waxaan isticmaali karnaa tilmaame sida stochastic ama RSI galaya xad-dhaaf ama kor u qaadista xaaladaha. Ama waxaan raadin karnaa tilmaame sida MACD ama DMI si ay u sameeyaan heerar sare ama hoos u dhac ku yimaada muuqaalka histogram-ka, taas oo muujinaysa is-beddel ku iman kara dareenka.
Ku sii wadida mawduucyada hooseeya ama sarreysa hooseeya waxay naga dhigtaa mid habboon qiimaha waxqabadka. Si aan ugu sarreyno faa'iidadeena, adoo ka soo baxaya waxa aan rajeyneyno inay noqon doonto waqtiga saxda ah marka la qiyaaso tiro muunad ah oo ku saabsan xirfadaheena, waxaan u baahanahay inaan raadino tilmaamo sida laga yaabo inay noqoto mid ka soo horjeeda dareenka. Ganacsatada suuqyada ah ee isticmaalaya ficilka qiimaha waxa ay noqonkartaa sicir aan ku dhicin in ay sameyso heerar cusub, sameynta laba dushood iyo laba jibbaar ah jaantusyada maalinlaha ah, ama ficilada caadiga ah ee shumaca doji, taas oo muujinaysa in dareenka suuqa laga yaabo inuu isbedelay. Inkastoo aan 100% lagu kalsoonaan karo waqtigaan lagu tijaabiyey hababka loogu yeerayo dib u celinta suuqyada, ama joojinta tamarta hadda jirta, waxaa loo isticmaali karaa si wax-ku-ool ah si ay nooga dhigto inaan ka baxno xirfadeena, waxaana rajeyneynaa in aan sare u qaadno faa'iidada jirta.
Dabcan waxaa jira dhacdooyin markii aan ka baxeyno suuqa, waxaanan rumaysanahay in aan qaadannay pips dhibcood oo ka imanaya suuqa suuqyada ah ee suurtogalka ah in aan awoodno, ka dibna daawashada ciriiri ahaan marka qiimaha marka hore la soo celiyo ka dibna sii wadaan jihada hore. Si kastaba ha ahaatee, taasi waa mid ka mid ah khataraha iyo ciqaabta aan bixineyno sababtoo, sida aan soo jeedinnay bilawga, iyada oo aan loo eegin inta uu le'eg yahay iyo guulaha xirfadeed ee aanu ku hayno warshadan waxaan marnaba maamuli doonin inaynu ka baxno, Noqo mid kaamil ah, laakiin waxa aan sameyn karno waa tababar heer sare ah.
« iibka cusub ee USA guriga si lama filaan ah shil by 14.5% bishii March, sida wax soo saarka kor u kacda Mareykanka ee xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan xaq muddo saddex sano ah bishii April Kalluumeysatada Ganacsiga Jarmalka Kicinaysa Calaamadaha Kobaca »